ICorona ivule amanye amathuba kwabesifazane
UNKSZ Jabulile Nala, obumba izinkamba uthe ukugadla kweCorona kumfundise ukusebenzisa kakhulu izinkundla zokuxhumana, ukuze akhangise umsebenzi wakhe. ngenxa yokuthi ubengasakwazi ukuya emibukisweni kwamanye amazwe ayodayisa, ezokuxhumana zimsizile Isithombe: SIGCINIWE
Phili Mjoli | December 23, 2021
UKUHLASELA kweCovid-19 kuleli, kushaye kwezwela emabhizinisi amaningi. Lokho kudale ukuthi kuvalwe amanye amabhizinisi, amanye ashintshe indlela yokusebenza ngenxa yokugadla kobhubhane.
Abantu besifazane abasemkhakheni wokuhlela imicimbi, baphoqelekile ukuthi basebenzise amanye amasu okuziphilisa ngoba kuke kwanesikhathi lapho imicimbi ibivaliwe ngenxa yemigomo kahulumeni yonqanda ukusabalala kwegciwane.
UNksz Thembi Ndlovu waseSoweto, obehlela imicimbi ngaphambi kokuthi kufike iCorona kuleli, uthe ibhizinisi lakhe liwe bhu ngalesi sikhathi. Wabona ukuthi uma engazami enye indlela ezomngenisela imali, uzolala engadlile wase ecabanga ukugaya umqombothi awudayisele abanemicimbi emincane, ebivulelekile ngalesi sikhathi.
Leli bhizinisi liphenduke undabuzekwayo ezinkundleni zezokuxhumana ngenxa yokuthi abantu banenkolelo yokuthi umqombothi kumele ugaywe kulowo muzi okuzoba nomcimbi kuwo, awuthengwa.
UGASELA kwegciwane kuwise ibhizinisi likaNksz Thembi Ndlovu waseSoweto, obeziphilisa ngokuhlela imicimbi. Wabe esevula elokugaya umqombothi awudayise abanye abantu kanti nalo liyakhula Isithombe: SIGCINIWE
Akabagqizi qakala abamgxekayo uNksz Ndlovu kepha ulalela labo abamelulakayo ukuze ibhizinisi lakhe likhule. Leli bhizinisi elinonyaka lasungula ngaphandle kokudayisa umqombothi, usefundisa omakoti nabanye abafuna ukugaya utshwala. Uhambela izindawo ezidayisa inyama yangaphakathi ngoMsombuluko, iMogudu Monday lapho ekhangisa ngotshwala asuke ebudayisa ngezinkomishi futhi esebuthake ngevanilla, istrawberry nokunye.
UNKK Mamatu Joyisa, ongumpheki uthi ngemva kokuvalwa kwemicimbi, wavula uphiko olukhiqiza ucurry powder. Kumanje usudayiswa nakwezinye izifundazwe Isithombe: SITHUNYELWE
UNkk Mamatu Joyisa, umpheki onebhizinisi lokupheka eThekwini, uthi kwathi uma kuvalwa imicimbi wakhumbula ukuthi abantu abebaphekela babavamise ukuncoma zitshulu zakhe. Wabona kungcono agxile ekudayiseni ucurry powder, laqala kanjalo ibhizinisi lokudayisa lesi sithako azenzele sona, iChef Mamatu mix masala.
Nakuba imicimbi isivuliwe manje uthi isithako sakhe sidayiswa ubuthaphuthaphu njengoba kuyisikhathi samaholidi.
UNkk Maureen Mzobe, obenekhishi elidayisa ukudla okuphekiwe uthi ukuvalwa kwezwe kwaphoqa ukuthi ukuthi livalwe ikhishi. Waqala elinye ibhizinisi lokukuhlelela abantu izimpahla kwiwardrobe, i-One Day Made.
"Kwakumele ngicabange ngokushesha ukuthi ngizokwenzenjani ngoba umsebenzi engangiqashwe kuwo ngawuyeka ngaqala ibhizinisi, nakhu sekufika iCorona ishintsha izinhlelo. Sinomyeni wami siqhamuke nesu lokuthi sisungule ibhizinisi lokuhlanza emakhaya kodwa sagxila ekuqoqeni owardrope. Iningi belihleka uma sikhangisa leli bhizinisi kodwa basifonele. Njengamanje sibhukwe zonke izinsuku kuze kube unyaka ozayo," kusho uNkk Mzobe.
UNksz Jabulile Nala (51) odabuka eShowe, ongumbumbi wezinkamba, obezidayisa emibukisweni esemazweni aphesheya, uthe kushintshile ngesikhathi kufika iCorona ngoba imibukiso ibisialiwe nakho ukuhambela kwamanye amazwe sekuwumcikilisho.
" Kuphoqeleke ukuthi ngifunde ukusebenzisa ukudayisa izinkamba zami ngisenzisa izinkundla zezokuxhuma ne-email into ebengingayisebenzisi kakhulu phambilini. Bengazi ukuthi njalo ngonyaka ngizoya emibukisweni ethile ngidayise khona izinkamba zami bese lawo makhasimende ethenga ngesikhathi esizayo esebenzisa ubuchwepheshe. Ukuhlasela kwalesi sifo kungifundise ukuthi kule minyaka emibili kumele ngisebenzise izinkundla zezokuxhumana ukuze ngithole amakhasimende amasha," kusho uNksz Nala